MURUG:Da’yarkii Hore Ee Kooxda AC Milan Seid Visin Oo Nafta Isdhaafiyay – Garsoore Sports
MURUG:Da’yarkii Hore Ee…
MURUG:Da’yarkii Hore Ee Kooxda AC Milan Seid Visin Oo Nafta Isdhaafiyay
Da’yarkii hore ee kooxda Ac Milan Seid Visin ayaa is-dilay sababo la xiriira xadgudub cunsuriyadeed oo joogta ah oo uu wajahayay muddooyinkii u dambeeyay.
Visin, oo ka soo cayaaray akadeemiyada kooxaha AC Milan iyo Benevento, ayaa ku dhashay Itoobiya kahor inta uusan yaraantiisii usoo wareegin dalka Talyaaniga.
Waxaa soo korsaday waalidkiis Walter iyo Maddalena waxaana usuura gashay inuu hore usii wado riyadiisa ah inuu noqdo ciyaaryahan kubbada-cagta cayaara.
Hayeeshee, ciyaaryahanka da’dayar ayaa go’aansaday inuu diiradda saaro waxbarashadiisa isagoo cayaaraha ka fariistay sannadkii 2016kii – laakiin wuxuu sii waday inuu la ciyaaro koox 5 cayaaryahan ku cayaarta salaxyada oo lagu magacaabo Atletico Vitalica.
Waxay ahayd naadigii ku dhawaaqday geeridiisa naxdinta leh iyadoo meydkiisa lagasoo qaaday guriga qoyskiisa oo ku yaal magaalada Nocera.
Sida laga soo xigtay Corriere della Sera, wiilka yari wuxuu ka tagay warqad qoraal ah oo muujinaysa waxyaabaha ku dhaliyay inuu is dilo. Wuxuu sidoo kale warqada kaga hadlayaa dhibaatooyinka uu wajahayo qofka soo galootiga ah.
“Hadda, meel kasta oo aan tago, meel kasta oo aan joogo, waxaan ka dareemayaa garbaheyga, sida dhagax weyn inuu saaranyahay, sababtoo ah waa culeyska dadka oo shakiga, eexda, neceebka iyo argagaxa leh,” ayuu ku qoray warqadda.
Visin wuxuu sharraxay inuu dareemay kororka cunsuriyada ay la kulmaan dadka muhaajiriinta ah ee dega Talyaaniga.
Dhowaan ayaa la ogaaday in warqadda dardaaranka uu qoray bishii Janaayo sannadkii 2019 waxaana uu u diray qaar ka mid ah asxaabtiisa iyo dhaqtarkiisa cilminafsiga, sida ay ku warramayso warbaahinta Talyaaniga.
MAXAY LAGA DHAHAY GEERIDIISA?
Goolhayaha xulka qaranka talyaaniga Gianluigi Donnarumma ayaa saaxiib la ahaa Visin intii uu ku sugnaa AC Milan.
Goolhayaha 22-jirka ah wuxuu ka mid yahay kuwa badan oo ka tirsan bulshada kubbadda cagta ee ka hadasha geerida da’yarkan.
“Waxaan la kulmay Seid isla markii aan imid magaalada Milano, waxaan ku wada noolaan jirnay iskuul boodhin ah, dhowr sano ayaa kasoo wareegtay laakiin ma awoodo mana doonayo inaan iska iloobo dhoola cadeyntiisa cajiibka ahayd” Donnarumma ayaa sidaa u sheegay ANSA.
“Wuxuu ahaa saaxiib, wiil aniga oo kale ah.”
Cayaaryahanka reer Talyaani ee Claudio Marchisio ayaa sidoo kale ka hadlay geeridiisa iyadoo qoraal uu Facebook soo dhigay ku dhowaad 9,000 jeer la wadaagay, wuxuuna yiri: “Waxaan nahay wadan is dhexgal ah keliya marka da’yar hibo leh uu jiro ama markii aad dhaliso goolka go’aaminta ee cayaar muhiim ah, laakiin diida in loo adeego marka nin madoow ah uu makhaayad soo galo. “
Wuxuu intaas ku daray: “ ma qiyaasi karo waxa uu dareemay Seid Visin, laakiin waxaan hubaa in wadan ku riixaya wiil yar inuu sameeyo tilmaan xad dhaaf ah ay tahay wadan fashilmay”
“Ka fikir markii aad kaftankaaga nacasnimada ah samayso, markaad hadallo nacasnim shabakadaha bulshada oo la xiriira midabka iyo isirka.”
Xavi Oo Shaaca Ka Qaaday Inuu Iska Diiday Shaqada Tababarenimo Ee Barca Markale
TOOS: HEEGAN vs MCC